ပြောချင်တာပြောကြပါစေ(စ-ဆုံး)Pyaw Chin Tar Pyaw Kya Par Say မိုးဒီ၊ချစ်ဖွယ်၊ရှက်တယ်
Myat Chel Entertainment
25 เม.ย. 2021
103 150 มุมมอง
Pyaw Chin Tar Pyaw Kya Par Say
ဇာတ်လမ်း - ကျီးမနိုးတင်ဝင်း (ပေါင်းတည်)
ဇာတ်ညွှန်း - ဇော်မြင့်ဦး
ဒါရိုက်တာ - အောင်သြဘာ
လူလိမ်ဘိုးတော်ကို ဖမ်းလိုက်ရာမှ ဖမ်းမိသွားသူမှာ သူ၏ မတော်ရသေးသော ယောက္ခထီး ကြီး ဖြစ်နေလေတော့ရာ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာ ပြောချင်တာပြောကြပါစေ မှာ ခံစားကြည့်ပါ။
- မြန်မာ့ ဇာတ်ကား ချစ်သူအမျိုးတို့ရေ -
-ကြည့်ပြီးလို့ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Myat Chel Entertainment ကို Subscribe လုပ်ပေးပါ။
-ခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ထားပါနော။ Like ကလေးနှိပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Share ပေးပါနော။
-အားတဲ့ အချိန် လေးမှာ Comment လေးတွေလည်း လာရေးပါနော။ ယဥ်ကျေးသော Comment လေးတွေ၊ အားပေးတဲ့ Comment လေးတွေ ဖတ်ရတာကို Myat Chel Entertainment က ဂုဏ်ယူပါတယ်နော။
Music on this movie : Envato Element
Item to Myat Chel Media.
ကုိကု္ိ ခ်စ္တ့ဲ သဲေလး13 วันที่ผ่านมา
Tana Kon13 วันที่ผ่านมา
Vivo Y91c19 วันที่ผ่านมา
Anxbf Movmg19 วันที่ผ่านมา
မျက်ခြယ် ကတင်ပေးတဲ့ ဇာတ်ကား အကုန်လုံးကိုကြည့်ပီးလို့ တချို့ကားတွေဆို myat chel entertainment folder ဆိုပြီး computer မှာ သီးသန့်သိမ်းထားတာ မျက်ခြယ်က ဇာတ်ကားဟောင်းတွေ အကုန်လုံးကြိုက်တယ် ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ မျက်ခြယ်က ထုတ်ထားတဲ့ကားလေးပါ "မြား၏ဖြောင့်ချက်" နဲ့ "မြေကြီးကို ဒုက္ခပေးသူများ" ဆိုတဲ့ ဒွေး ကားလေးတင်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဗျာ အဲ့နှစ်ကားထဲက တစ်ကားလောက်တော့ အရင်တင်ပေးပါလားဗျာကျေးဇူးပြု၍❤️🙏🙏
Kyaw movie19 วันที่ผ่านมา
မ်က္​ျခယ္​မွာ ​ေနထက္​လင္း ဇတ္​ကား​ေကာင္​း​ေတြ အမ်ားျကီး႐ွိတယ္​ ဘာ​ေၾကာင္​့မတင္​​ေပးရတာလဲ ​အရမ္​း​ေကာင္​းတဲ့ဇတ္​ကား​ေကာင္​း​ေတြ ​ေတာ္​​ေတာ္​မ်ားတယ္​​ေလဗ်ာ
swan lay20 วันที่ผ่านมา
Myat Chel Entertainment18 วันที่ผ่านมา
@Kyaw movie မျဖစ္​ႏိုင္​တာ မဟာမွာက်​ေနာ္​ၾကည္​့ၿပီးၿပီ မမ်ားပါဘူး မ်က္​ျခယ္​ကထုတ္​လုပ္​ထားတဲ့ဇတ္​ကား​ေတြ30​ေလာက္​ပဲ႐ွိတာ ​ေနာက္​ထပ္​အမ်ားႀကီး႐ွိ​ေသးတယ္​​ေလဗ်ာ
swan lay19 วันที่ผ่านมา
@swan lay တချို့ နေထက်လင်း ကားတွေက mahar ကို ရောင်းလိုက်လို့ သူတို့ဆီမှာ မရှိတော့တာလည်းဖြစ်မှာပါ
@Kyaw movie မဟုတ္​​ေသးဘူးအကုိ မ်က္​ျခယ္​မွာက ​ေနထက္​လင္းဇတ္​ကား​ေတြ အရမ္​း​ေကာင္​းတာ ​ေရႊမ်က္​ျခယ္​က ခန္​႔စည္​သူပဲမ်ားတယ္​ ​ေနထက္​လင္းက အရမ္​းနည္​းတယ္​ ၿပီး​ေတာ့ တင္​ျပန္​​ေတာ့လည္​း သိပ္​မ​ေကာင္​းဘူး ဇတ္​ကား​ေကာင္​း​ေတြက်​ေတာ့ မတင္​​ေပးဘူးဗ်ာ
အလှည့်ကျတင်ပေးပါလိမ့်မယ် bro shwe myat chel media မှာလည်း တင်ပေးထားပါတယ်
ခန့်စည်သူ ရဲ့ မင်းမြတ်သူရ ဝတ္ထုကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ "ဇီဝစိုး ရွှေလိုဏ်ဂူ" "လနတ်သမီး" ကုမ္ဘဏ်တစ်ထောင်ရဲ့မိုးသူဇာ" အဲ့ကားလေးတွေလည်း အဆင်ပြေရင် တစ်ကားလောက် တင်ပေးပါလားသိမ်းထားချင်လို့ပါ မျက်ခြယ်က ထုတ်တဲ့ကားလေးတွေပါဗျာ မျက်ခြယ်က ဇာတ်ကားဟောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကြိုက်လို့ သိမ်းထားချင်လို့ပါနော်
Phyo Hein Kyaw20 วันที่ผ่านมา
"ဂန္ဘီရအချစ်" ခန့်စည်သူ နန္ဒာလှိုင် စိုးမြတ်နန္ဒာ ဇာတ်ကားတင်ပေးပါ
Khant Thike Oo20 วันที่ผ่านมา
wintun lat21 วันที่ผ่านมา
Phyo Myat Chel21 วันที่ผ่านมา
ခန့်စည်သူ ရဲ့ "မယ်တင်ကိုမလွမ်းရ" ဇာတ်ကားတင်ပေးပါ
Phyo Hein Kyaw21 วันที่ผ่านมา
ရဲကုိကုိ နဲ႔ေအာင္ပုိင္ အလွည့္ေရာက္ရင္တင္ေပးပါေနာ္ ေစာင့္ေနမယ္
ฮามา ปลาย21 วันที่ผ่านมา
အျမဲအားေပးေမ်ာ္က လင့္ေစာင့္ျကည့္ရႈ႔ေနပါမယ္ မ်က္ျခယ္
နတ်ကတော်မလေးမိယဥ်လက်Nat Ka Taw Ma Lay Mi Yin Latယဥ်လက်၊မင်းသူ၊ခင်စိုးပိုင်
มุมมอง6600
ကမ္ဘာကျော်ကော်တစ်ရာ-၂(ဟာသ-စ/ဆုံး) ခန့်စည်သူ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ Myanmar Movies ၊မြန်မာဇာတ်ကား ၊ Comedy
Arr Mann Entertainment
มุมมอง 57 000
มุมมอง7106 515
Anna Celebeauty แอนนา พี่จี้
มุมมอง 181 450
aespa 에스파 'Next Level' MV Teaser
มุมมอง3999 652
ไม่อยากเป็นเสือ!+ สามซ่าสุดมัน โชค ไทรถแห่xเจน เจ้าค่ะ
อิสาน เเสดงสด : ISAN LIVE SHOW
มุมมอง 60 398
Myanmar Movies - အချစ်ကိုတွေ့ရှိခြင်း (ကျော်ဟိန်း၊ခန့်စည်သူ၊ကြည်လဲ့လဲ့ဦး)
SEIN HTAY Film Production
มุมมอง 37 000
ကျော်ကပ်စေးနှင့်ခုနစ်လွှာမျက်နှာ- မော့စ်၊ မြတ်မော်၊ ထက်အိကလျာ၊ မေမြတ်အိန္ဒြေကျော်
CELE CITY MEDIA
มุมมอง 182 000
အဟီး (အပိုင်း ၁)Ah Hee (Part 1)မိုးဒီ၊ချစ်ဖွယ်၊ရှက်တယ်၊ခင်မို့မို့အေး၊ပပစိုးကြည်
Shwe Myat Chel Media
มุมมอง 25 000
ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာလွမ်း-ကျော်ဟိန်း ဖြိုးငွေစိုး မိုးပြည့်ပြည့်မောင် ချောရတနာ
มุมมอง 52 000
၁၉၃၈ ဒိုင်ယာရီ(အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်း)-ကျော်ရဲအောင်၊ နေမျိုးအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အောင်ခိုင်၊ သိင်္ဂီထွန်း
มุมมอง 733 000
လူလည်ကြီး (ဟာသကားစဆုံး) လွင်မိုး ဖြိုးငွေစိုး ထက်ထက်မိုးဦး - မြန်မာဇာတ်ကား - Myanmar Movie
Aung Thiri Entertainment
Myanmar Movie-Ko Gyi Kyaw-Kyaw Ye Aung, Khine Thin Kyi
ပါးပါးလေးတော့လွဲနေတယ် - ကျော်ရဲအောင်၊ ထက်ထက်မိုးဦး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ စိုးပြည့်သဇင် @CELE CITY MEDIA
มุมมอง 74 000
" ဘီအက်စ်အေမိုးကောင်းနှင့်ဘိုင်စကယ်သာဂိ " မိုးကောင်း ခင်လှိုင် မိုးဒီ ဝင်းသပြေထွန်း #myanmarmovie
มุมมอง 536 000
ကိုးင်္သချိုင်းဓားနှင့်သံချပ်ကာလူသား - နေရဲလင်း၊ မိုးမြင့်ထက်၊ ချောသီရိစံ၊ ပန်းအိဇွန်
มุมมอง 86 000
เด็กเส้น...เด็กฝาก !! ใครรับเข้ามาทำงานเนี่ย.. (ละครสั้น) - ห้าโมงเย็น แชนแนล
มุมมอง 231 731
สปอย เด็กใหม่2 | รวม EP.1-8
มุมมอง 744 427
แต่งงานกันเมื่อไหร่ดีนะ? l Q&A ep6💍💝
มุมมอง 390 936
ห้ามเขิน!! ดูรูปหนุ่มหล่อสาวสวย (แคระ VS แฟนแคระ)
มุมมอง 410 631
#สปอยหนัง เมื่อเด็กเกเรสามคนโดนลงโทษ ถูกส่งให้ไปเข้าแคมป์กลางป่าเขาเพื่อ​ดัดนิสัย
มุมมอง 291 521
ชาเลนจ์อาหารกัมมี่ 100 ชั้น! || ชาเลนจ์สุดฮาไว้ลองโดย 123 GO! GOLD
123 GO! GOLD Thai
มุมมอง3404 420
Doritos Commercial I Want Sumo Doritos Vs Vlad And Niki & Diana Coffin Dance Parody
มุมมอง3581 368